सिर्जना, कला र विचारको त्रिवेणी: December 2009
साहित्यकार वनझाँक्री होइन
ओझाङहाङ नेम्वाङ । यो अहिलेका बैरागी काइँलाको न्वारानको नाम हो । कुनै लिम्बू बालकको नाम रामबहादुर वा कृष्णप्रसाद हुने कुरै भएन । तर, यो ओझाङहाङ नाम धेरै पहिलेदेखि नै गुमनाम भइसक्यो । अहिले चौतर्फी चर्चा छ त केवल बैरागी काइँलाको मात्रै । स्कुल पढ्दाताका राखिएको तिलविक्रम नेम्वाङ पनि खास औपचारिकतामा मात्रै सीमित छ । दार्जिलिङ पुगेर कविता लेख्न थालेपछि उनले आफ्नो नाम आफैँ राखेका थिए । ओझाङहाङलाई अहिले सबैले सबैतिर बोलाइरहेछन्- ए ! बैरागी काइँलादाइ !
सन् १९६० को दशक वरिपरि दार्जिलिङतिरैका साहित्यिक कार्यक्रममा ईश्वर बल्लभ र इन्द्रबहादुर राईसँग काइँलाको भेट हुन थाल्यो । भेटले एउटा आन्दोलनको आकार लियो । तिनताकाको 'तेस्रो आयाम' नामको तीनखम्बे साहित्यिक आन्दोलनका एक खम्बा उनै थिए, बाँकी त बल्लभ र राई भइगए । उबेलाको जोस अर्कै थियो- साहित्यमा 'केही नयाँ दिनुपर्छ' भन्ने । 'केही नयाँ गर्ने र प्रचलित धारणाभन्दा फरक धारणा ल्याएर अरूभन्दा भिन्न देखिने होड थियो,' काइँलाले 'तेस्रो आयाम'को अन्तर्कथा कहन थाले, 'हामी तीनजना मिलेर एउटा साहित्यिक पत्रिका प्रकाशन गरौँ भन्ने सल्लाह गर्‍यौँ, मैले फ्याट्टै 'तेस्रो आयाम' नाम जुराएँ । मान्छे भेट्ने, यताउति कुद्ने काम बल्लभको थियो, विचार संयोजन गर्ने काम राईले गथ्र्यो, मेरो काम आर्थिक व्यवस्था मिलाउने थियो ।' यस्तो कार्यविभाजनसहित 'तेस्रो आयाम' प्रकाशन सुरु भयो । तर, 'तेस्रो आयाम' नाम नै किन त ? 'खै, किन किन,' परिपक्व अनुहारमा अन्यमनस्क हाँसो हाँस्दै उनले भने, 'त्यही राखौँ भनिदिएँ, राखियो ।'
विनाअर्थको नाम पनि चुनिन्छ त ? 'अर्थ नभएको कहाँ हो र ?' प्रश्नको चिम्टाले समातेपछि बल्ल काइँलाबाले आयामिक व्याख्या गर्न थाले, 'विज्ञानले पनि वस्तुको तीन आयाम हुन्छ भन्छ- लम्बाइ, चौडाइ र उचाइ -वा गहिराइ) । मान्छेको जीवन पनि एकोहोरो र तेस्रो मात्रै हुँदैन, यो वक्र, जटिल र त्रिआयामिक हुन्छ भनेर हामीले परिभाषित गर्‍यौँ । साहित्यमा पनि त्यही जीवनको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भनेर व्याख्या गर्‍यौँ ।' के त्यो आन्दोलन कुनै परम्परा वा स्थापित साहित्यको विरोधमा थियो ? 'होइन,' उनले थप स्पष्टीकरण दिए, 'विरोधले विकल्प जन्माउँछ, विकल्पले नयाँ कुरा त दिन्छ । तर, नयाँ र भिन्न देखिन विरोधमात्रै गरिरहनु पर्दैन । समानान्तर रूपमा क्रियाशील भएर पनि उस्तै नयाँ दिन सकिन्छ । हामीले त्यही गरेका हौँ, कसैको विरोध नगरीकन साहित्यमा नयाँपन दिने काम ।'
त, बैरागी काइँलाहरूको 'तेस्रो आयाम' आन्दोलनले के दियो त नेपाली साहित्यलाई नयाँ ? उनी भन्छन्, 'केही न केही त दियौँ नि !' जीवनमा दुःख, पीर, घृणा, रिसइबी, छलकपट छ भन्दैमा साहित्यमा राम्रो-राम्रो बाँचेको कुरा मात्रै लेख्ने होइन, समग्र जीवन लेख्नुपर्छ भनेर आफूहरूले नै बोलेको दाबी गर्छन् काइँला । एउटै मान्छेको कथा लेखिएको भए पनि त्यसले सबैको कथा बोकेको हुनुपर्छ भन्ने 'तेस्रो आयाम'को मान्यता भएको उनले सम्झे । 'पीडा भन्दैमा साहित्यमा एउटा मान्छेको 'राँडी रुवाइ' मात्रै छ भने त्यो अरूले पढ्नुपर्ने के खाँचो ? त्यस्तो साहित्य अरूले किन पढ्ने ?' शालीन काइँलादाइ यहाँनेर अलि झोँक्किए, 'कुनै व्यक्तिको गनगन लेखेर साहित्य दीर्घजीवी पनि बन्दैन, त्यस्तो साहित्य महत्त्वपूर्ण र गहन पनि हुँदैन ।' व्यक्तिको पीडा साहित्य बन्नै सक्दैन र कवि महोदय ? 'मातेको मान्छेको भाषण...' लेख्ने कवि काइँला झन् उत्तेजित भए, 'व्यक्तिको पीडा भए पनि उसले भोगेको कुरा अरू छिमेक, आफन्त र साथीहरूले सहअनुभूति गर्‍यो भने नै त्यो सबैको हुँदै जाने हो । तर, व्यक्तिको विनासित्तिको 'राँडी रुवाइ' अरूका लागि के काम ?'
'तेस्रो आयाम' सुरु गर्नेहरूलाई कुनै राजनीतिक दर्शनले प्रेरित गरेको थियो ? प्रश्न सुनेर काइँला टक्टकिए- त्यो आन्दोलन कुनै राजनीतिक उद्देश्यले गरिएको थिएन । कतै न कतैको, केही न केही प्रभाव थियो कि ? 'त्यस्तो पनि थिएन,' उनले भने । अहिलेको उत्तरआधुनिकतावादी 'हल्लाखल्ला' को नेपाली संस्करणको पूर्वरूप त्यही आन्दोलन हो भन्नेहरू पनि छन् । प्रश्न गरियो- के त्यो पाश्चात्य साहित्यबाट प्रभावित हो त ? 'विचारलाई पुष्टि गर्न सबैतिरको अध्ययन त गर्नैपर्छ,' यी पाका कविले फेरि शालीन शैलीमा असहमति व्यक्त गरे, 'हामी वनझाँक्री त हैनौँ नि, वनबाट फुत्त निस्केर सारा बिमार फु-फा गरेर चट् पारिदिने ! हामीले पनि धेरैतिरको साहित्य अध्ययन गरेका थियौँ ।' धेरैतिर अध्ययन गरेर आन्दोलन सुरु गरे पनि उनीहरूले आलोचना चौतर्फी खेप्नुपर्‍यो । आलोचनाको प्रहार काइँलामाथि केही कम भएछ । 'बल्लभ बढी लेख्थ्यो, उसले बढी नै विरोध खप्यो, राईले पनि धेरै नै विरोध खप्नुपर्‍यो,' उनले भने, 'जति विरोध गर्छन्, उति सक्रिय भयौँ । ती विरोधीले गर्दा नै हामी आज ठूला साहित्यकार भयौँ,
धन्य विरोधीहरू !' काइँलाले विरोधीलाई हात जोडेर धन्यवाद दिए ।
विरोधीको प्रतिरोध गर्न तीन सदस्यीय आयामिक टोलीले विभिन्न सिद्धान्त र विचारको पक्कै पनि सहारा लियो । योचाहिँ उनी पनि स्विकार्छन् । अहिले बिर्सिसके पनि त्यतिबेलाका प्रभावशाली विचार आफ्नो टोलीले ग्रहण गरेकोमा उनी सहमत छन् । फेरि दोहोर्‍याए, 'मैले भनिहालेँ- साहित्यकार कुनै वनझाँक्री होइन, समाजमा रहेका विचार र सिद्धान्तभन्दा पर रहन सक्ने र फु-फा जान्ने ।' तर, 'उत्तरआधुनिकता' शब्दबारे भने काइँलाहरूलाई त्यतिबेला कुनै हेक्का थिएन । उनले भने, 'यो उत्तरआधुनिकता भनेको त अर्कै पो छ होला, हाम्रो लेखनलाई उत्तरआधुनिकताको पूर्वरूप भन्नु त मूर्खता मात्रै हो ।'
तेस्रो आयाम' थियो साहित्यिक आन्दोलन । काइँलाकै शब्दमा 'कुनै राजनीति' भन्दा परको । तर समय बित्यो, बैरागी काइँला २०६२/०६३ मा त राजनीतिक आन्दोलनमै सडकमा अघिअघि हिँडे । यमानको शरीर भएको लिम्बू बूढो संस्कृतिकर्मी र स्रष्टाहरूको अगुवाइ गरेर नारा लगाइरहेको थियो- लोकतन्त्र जिन्दावाद ! जिन्दावाद-जिन्दावाद ! भन्न सकिन्छ- बैरागी काइँला 'आन्दोलनकारी' साहित्यकार हुन् । चार दशकअघिदेखि साहित्यमा लागेका कवि काइँला पछिल्लो आन्दोलनका दिन सम्झेर अहिले पनि गर्वको अनुभूति गर्दारहेछन् । '२०६२/०६३ को राजनीतिक परिवर्तनमा हामी स्रष्टाहरूको पनि अलिअलि योगदान छ,' हँसिलो र गमिलो मुद्रामा उनले भने, 'जन्मँदै शासक हुने राज परम्पराको अन्त्य भयो, अब यो राष्ट्रको नेतृत्व गर्ने अवसर सबै नागरिकलाई बराबर छ ।' यसो भनिरहँदा काइँला कुनै कविता पाठ गरिरहेको बेलाजस्तो उत्साहित र भावुक देखिए ।
तत्कालीन स्रष्टा आन्दोलनको पहिलो काम राजनीतिक पद्धति र परम्परा बदल्नु थियो र दोस्रो त्यो परिवर्तनलाई दिगो बनाइराख्न सांस्कृतिक रूपान्तरणमा ध्यान दिनु । 'सांस्कृतिक चेतनाको धरातलमा परिवर्तन नभएसम्म राजनीतिक परिवर्तन स्थायी हुँदैन भन्नेमा एकमत भएर,' काइँलाले लोकतान्त्रिक स्रष्टाहरूको संयुक्त मञ्चको उद्देश्य सम्झे, 'हामी सबै वामपन्थी र लोकतन्त्रवादी स्रष्टाहरू आन्दोलनमा लागेका थियौँ ।' तर, राजनीतिक परिवर्तनपछि यो दोस्रो उद्देश्य कसैको प्राथमिकतामा परेन । स्रष्टा मञ्चको अध्यक्षमण्डलको संयोजक रहेका काइँलाले पनि त्यो पद र जिम्मेवारी अब झन्डै बिर्सिन आँटिसके । किन यस्तो भएको त ? 'राजनीतिक परिवर्तन पहिलो उद्देश्य थियो र मुख्य थियो,' उनले भने, 'सांस्कृतिक रूपान्तरण दोस्रो थियो, तर महत्त्वपूर्ण थियो ।' त्यही महत्त्वपूर्ण उद्देश्य पूरा गर्नका लागि सबै राजनीतिक दलले आफ्नो दलका समर्थक साहित्यकारलाई समानुपातिक पद्धतिबाट संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गराऊन् भन्ने स्रष्टाहरूको माग भएको काइँला सम्झन्छन् । 'पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरूलाई होइन, पार्टीबाहिरका तर समर्थकलाई लैजान भनेको हो,' काइँलाले चुनावअघिको कुनै दिन सम्झे, 'मैले त एमालेका तत्कालीन महासचिव माधवकुमार नेपाललाई भेटेरै पनि यो कुरा भनेको थिएँ ।' तर, त्यो भन्नु मात्रै भयो । उनले गुनासो गरे, 'राजनीतिकर्मीले स्रष्टाहरूको भूमिका र महत्त्वलाई नबुझेकाले परिवर्तनपछि यस्तो हुन गयो ।' तैपनि, काइँला बैरागिएका छैनन् । परिवर्तनको बिरुवा रोप्ने काम स्रष्टाहरूले गरे पनि त्यसलाई हुर्काउने, बढाउने, जोगाउने जिम्मा राजनीतिकर्मीलाई नै दिनुपर्छ भन्ने उनको विश्वास छ । 'त्यो जिम्मा उनीहरू -राजनीतिकर्मी) लाई नै दिने हो,' उनले निर्धक्क भने ।
परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने जिम्मा जसलाई दिने हो उनीहरू नै विश्वासलाग्दा र भरपर्दा छैनन् । काइँलालाई पनि त्यस्तै लागिरहेको छ, राजनीतिकर्मीले स्रष्टाको स्वर र साहित्यको मर्म बुझिरहेका छैनन् । उनी साहित्यकारलाई स्वस्थ मन भएका र असल मान्छे भन्न रुचाउँछन् । जसले केही न केही रचना गर्छ, उसले बिगार्दैन भन्नेमा कवि काइँला ढुक्क छन् । त्यसैले त उनी भन्छन्, 'कवि-साहित्यकार बिगारसिङ होइनन्, रचना गर्ने साहित्यकार नराम्रा काममा लाग्दैनन् ।' तर, राजनीतिकर्मीमाथि भने उनको त्यति धेरै विश्वास छैन । सत्ता प्राप्तिका लागि जनता र आन्दोलनलाई माध्यम बनाउने नेतालाई त उनले हाकाहाकी 'बिगारसिङ' नै भनिदिए । 'सत्तालोलुपमा गएनन् भने मात्रै राजनीतिकर्मी निर्माण गर्ने रचनाकार हुन्,' काइँलाले भने, 'तर, हामीकहाँ नेताहरू सबै सत्ताको छिनाझम्टी र लुछाचुँडीमा उछिनपाछिन गरिरहेका छन् ।'
पाँचथर, इलाम, दार्जिलिङ र काठमाडौं हुँदै बैरागी काइँलाले तीनबीसे दस हिउँद-बर्खा खर्लप्पै निलिसके । उबेला उनमा कविता लेख्ने अर्कै जोस थियो, 'केही नयाँ गर्ने' उत्साह थियो । तर, दिन यसरी बित्दै गए, काइँलाको कविता-कर्म सुस्तायो । बरु उनी त लिम्बूको भाषा-संस्कृतिको खोज गर्ने र पुस्तक प्रकाशन गर्नेतिर लागे । तीन दशकसम्म उनले पुरानै आयामिक कविताको ब्याजमा 'कवि' पद पाइरहे । 'दुई वर्षअघि दुई/चारवटा कविता लेखेको छु,' हाँस्दै-हाँस्दै उनले भने, 'म यस्तै स्वभावको छु, एक वर्ष लेख्यो, धेरै वर्ष त्यत्तिकै बस्यो ।' तैपनि, आफूले वरिष्ठ साहित्यकारको परिचय पाइरहेकोमा उनी गमक्क परे । 'अब त म लेखे पनि साहित्यकार, नलेखे पनि साहित्यकार । सबैले मलाई साहित्यकार नै भन्छन्, म त लेखेर भन्दा पनि मन र मस्तिष्कले साहित्यकार भएको रहेछु ।'
०६२/६३ को परिवर्तनलगत्तै साहित्यिक बजारमा हल्ला थियो- प्रज्ञाप्रतिष्ठानको कुलपतिमा अब बैरागी काइँला जान्छन् । काइँला नै जानुपर्छ भन्ने आवाज पनि एउटा कोणबाट उठिरहेकै थियो । काइँलासहितका स्रष्टाहरूको सुझावमै प्रज्ञाप्रतिष्ठानको पुनर्संरचना गर्दै भाषा-साहित्य, ललितकला र नाट्य-संगीत गरी तीनवटा प्रज्ञाप्रतिष्ठान गठन गरिएका छन् । तर, अहिलेसम्म तीनवटै प्रतिष्ठानमा प्राज्ञसभा र प्राज्ञपरिषद् गठन हुन सकेको छैन । अघिल्लो सरकारको समयमा भएको 'प्रयत्न' पनि विफल भयो ।
फेरि बजारमा भाषा-साहित्य प्रज्ञाप्रतिष्ठानको कुलपतिमा बैरागी काइँलाकै नाममा तापक्रम बढ्दै छ । के छ कवि काइँलाको योजना ? प्रज्ञाप्रतिष्ठानतिर पाइला बढाउँदै हो ? 'बनाउनेले लैजान चाहन्नन्,' कवि काइँला त्यति उत्साही देखिएनन्, 'चाहना गर्ने साथीहरू होलान्, तर उनीहरूले बनाउन सक्दैनन् । फेरि चाहँदैमा सबै कुरा कहाँ पुग्छ र ?' प्रज्ञाप्रतिष्ठानमा जाने काइँलाकै चाहना छ कि छैन ? प्रतिष्ठानमा गएर फेरि पनि 'केही नयाँ गर्ने' योजना छ कि ? प्रश्न सुनेर बैरागीले टाउको हल्लाए, 'म एकेडेमीका लागि त्यत्ति योग्य छैन, अहिले म इच्छुक पनि छैन ।' उनले प्रतिष्ठान सम्बन्धमा कुनै योजना पनि सुनाएनन् । बरु आफू प्रतिष्ठानमा जानका लागि किन योग्य छैन भन्नेबारे तीनवटा बुँदा पेस गरे-
१. मेरो कमजोर स्वास्थ्य र बुढ्यौलीले साथ दिँदैन
२. मसँग काम गर्ने ऊर्जा र सक्रियताको कमी छ
३. काम गर्नका लागि मसँग कुनै भिजन नै छैन
बजारमा चिया गफ गर्नेदेखि राजनीतिको लेनदेन मिलाउनेसम्मले भाषा-साहित्य प्रज्ञाप्रतिष्ठानको कुलपति पदमा ठूलो ज्यानका पाका कवि बैरागी काइँला गजधम्म बसेको देखिसकेका छन् । 'अब काइँलै हो,' 'बैरागी काइँलाको विकल्पै छैन,' 'छिट्टै काइँला नियुक्त हुँदै छन्,' यस्ता दाबी दोहोरिइरहेका छन् । कतिले त उनलाई बधाइ पनि दिइसके । तर, उनी आफ्नो अयोग्यताको सूची बनाएर बसेका पो रहेछन् ।
सरकारले अनुरोध गर्‍यो वा नियुक्त गर्‍यो भने के गर्नुहुन्छ ? 'होइन, मेरो त्यत्ति जाँगर छैन,' काइँलाले 'त्यत्ति' शब्दमा जोडमात्रै दिएनन्, अलिकति लेघ्रो पनि ताने- 'त्य...त्ति... जाँगर छैन ।' उनले थपे, 'गइहाले पनि मैले फुर्तिसाथ काम गर्न सक्छु भन्ने मैलाई विश्वास छैन । भिजन बनाएर काम गर्न त झन् गाह्रो छ ।'
कवि काइँलामा अब उबेलाको जस्तो कविता लेख्ने जोस पनि छैन । बरु नातिसित खेल्नमा बेग्लै आनन्द छ । उनको बिहान पनि नातिसँगै सुरु हुन्छ र नातिसँग खेल्दाखेल्दै तारा उदाइसक्छन् । आँखाको समस्याले गर्दा त्यत्ति पढ्न पनि सक्दैनन् उनी । 'अहिलेको मेरो साथी एफएम रेडियो भएको छ,' उनको बुढेसकालको दोस्तको पनि अवगुण रहेछ, 'तर, एफएम रेडियोले पनि प्रत्येक घण्टा उही समाचार दोहोर्‍याउँछ । केही नयाँ भन्ला कि भन्यो, घन्टैपिच्छे उही खबर सुनाएर हैरान पार्छ ।' उनले बिहान नयाँ समाचार सुन्नुपर्‍यो भनेर हतारमा एफएम रेडियो खोल्दारहेछन् । विडम्बना, रेडियोले बेलुका जुन समाचार सुनाएको थियो, बिहान उही जस्ताको तस्तै दोहोर्‍याइदिन्छ । 'कतै दुर्घटना भएको रहेछ भने सुनाउला,' दिग्दार स्वरमा उनले भने, 'नत्र, हिजो बेलुकाकै समाचार सुनाउँछ ।' यी कविलाई लागिरहेको होला, बुढेसकालमा एफएम रेडियोले पनि सास्ती दिँदोरहेछ ।
अरू के कसरी बितिरहेका छन् त दिन ? 'दिन त्यसै पनि बित्दोरहेछ हौ भाइ,' ठट्यौलोपारामा उनी खित्खिताए, 'दिन बिताउने भनेर कुनै कार्यक्रम बनाउनै नपर्दोरहेछ । बिहान यही नातिसँग खेल्यो, यसैलाई स्कुल पुर्‍याउन गयो, दिउँसो यसै बस्यो, कहिलेकाहीँ कतै कार्यक्रमतिर गयो, बेलुका यही नातिलाई लिन गयो । यस्तैमा दिन बितिरहेछ ।' उनले यसो भनिरहँदा उनको नाति आङसान नेम्वाङ हजुरबाको वरिपरि फुत्रुङफुत्रुङ उफ्रिरहेको थियो । गत शुक्रबार काठमाडौं सुकेधारा हाइटको घरमा काइँला कुनै भावुक 'कवि' भन्दा मायालु हजुरबाजस्ता देखिएका थिए । झमक्क साँझ परेपछि फेरि भेट्ने बाचासहित हामीले हात जोड्यौँ । बुढेसकालमा पनि उनका आँखामा उस्तै जोसिलो चमक देखियो, जुन आँखाले साढे चार दशकअघि पर्वत चढेको सपना देख्थे । उनले लेखेका थिए-
घरभित्र पनि सिरान तला उक्लिँदा
डाँडाडाँडा अग्लो डिल भरेङको
प्रायःजसो म उक्लिन्छु,
Posted by Narthunge at 5:12 AM No comments:
Posted by Narthunge at 1:31 AM No comments:
खलंगा, खुकुरी र फिरङ्गी
उत्तराखण्डको मसुरीमा रहेको एक कलेजको लाइब्रेरी भोको मनले खोतल्दै थिएँ । पुराना ठेलीहरूको बीचमा चेपिएको 'खलंगा, खुकुरी और फिरङ्गी' (१९६२) पाएँ । खलंगा र खुकुरी शब्दले मलाई तानिहाल्यो । यी न्याना शब्दहरूले मलाई बालककालमा विद्यालयमा पढेको नालापानी किल्लाको कविता याद आयो । पैतालाको रगत शिरसम्म एकैझमटमा पुर्‍याउने त्यो कविता हामी खुव रस लिई-लिई वाचन गर्दथ्यौँ । केबी क्षेत्रीयको ऐतिहासिक उपन्यास खलंगा, खुकुरी और फिरङ्गी एकैबसाइमा पढेपछि आज जाउँला, भोलि जाउँला भन्दै पछि सर्दै गइरहेको बलभद्र कुँवरले वीरता देखाएको नालापानी किल्लाको अवलोकनका लागि साथ दिन समय मिलाउन अनुरोध गर्दै गोर्खा डेमोक्रेटिक पन्टका नगरअध्यक्ष आसु लामालाई फोन गरेँ । उनलेे सहर्ष स्वीकार गरेपछि भोलिको कार्यक्रम मनभरि लिएर सुतेँ ।
बिहानको चिसो हावामा हामी स्कुटर लिएर सहस्रधारा रोडतर्फ बढ्दै गयौँ । रिस्पना नदीको किनारमा भारतीय पुरातत्त्व विभागले संरक्षण गरिराखेको सहिद स्तम्भमा हामी रोकियौँ । विजेताले आफ्नो दिवंगत जनरल र बहादुर शत्रु गोर्खालीका सम्मानमा बनाइदिएको स्तम्भलाई आँखाभरि मैले सजाएँ । जनरल जिलेस्पी र बलभद्र कुँवरको सम्मानमा कुँदिएको ताम्रपत्र छातीमा बोकेर साथसाथ उभिएका दुई सेता स्तम्भ एक-अर्कासँग बोल्लान्-बोल्लान्, हाइहेल्लो गर्लान्-गर्लान् जस्तो लाग्यो । 'वीरले मात्र वीर शत्रुको सम्मान गर्न सक्छ,' आसुले आफ्नो लामो केश अनुहारबाट पन्छाउँदै सुनाए । मैले उनको त्यो मंगोलियन अनुहारमा वीर गोर्खालीको सन्तान हुनुको लालिमा देखेँ ।
त्यहाँबाट अगाडि बढेपछि नालापानी चोकबाट हामी बायाँ बढ्यौँ । केही क्षणपछि नालापानी खलंगा प्रवेशद्वार आयो । त्यसपछि स्कुटर सालको जंगलतर्फ उकालो लाग्यो । बिहानको कलिलो घाममा सालका अग्ला रूखहरू परेडका लागि लामबद्ध सिपाहीझैं देखिएका थिए । ती अग्ला सिपाहीझैं रूखहरूका छेउछाउका फुच्चाफुच्चा रूखहरू परेड हेर्दा उदेक मानिरहेका बालकझैं देखिएका थिए । जंगल शान्त थियो । सर्पजस्तै कालोपत्रे सडक चुपचाप । सन् १८१४ का दिवंगत वीरहरूका रगतले रंगिएको माटोलाई सुम्सुम्याउँदै अगाडि बढिरहेको थियो । अचानक स्कुटरको वेग कम गर्दै आसुले भने, 'यही पोखरीको छेउबाट अंग्रेजले तोपवषर्ा गरेका थिए ।' त्यहाँबाट मैले माथि डाँडामा हेरेँ । जो थाप्लाभरि सालका रूखहरू उभ्याएर हामीलाई हेरिरहेको थियो । केही अघि बढेपछि बाटोको बायाँपट्ट िएक हुल मानिस देखिए । तीमध्ये धेरैको टाउकामा नेपाली ढाकाटोपी सजिएका थिए । आसुले स्कुटर रोके । उनीहरू नोभेम्बर २९ र ३० मा हरेक वर्ष आयोजना गरिने 'खलंगा मेला'को तयारीका लागि मिटिङ बस्दै रहेछन् ।
'३० नोभेम्बर १८१४ मा वीर सेनानायक बलभद्र कुँवरले ७०/७५ सैनिकका साथ खलंगा छोडेका थिए । त्यसै दिनको यादमा हामीले यो मेला मनाउन थालेका हौँ,' अझै रातापिरा देखिने ११ गोर्खा राइफल्सका पूर्वसैनिक आलेज्यूले हामीलाई मेलाको ऐतिहासिकता बताए । 'इतिहास जोगाउन र छोरानातिलाई आफ्नो इतिहासमा गौरव गर्न सिकाउन केही हदसम्म यो मेलाले मद्दत गर्छ नै,' परबाट चड्का आवाजमा भादगाउँले टोपी लगाएका अधबैंसे कराए । म कृतज्ञ भएँ । टाउको हल्लाएर आल्हादित हुनुसिवाय मलाई केही सुझेन ।
बाटोका दुवैपट्टि अग्लाअग्ला धमिराका ढिस्काहरू थिए । तपस्वीझैं ठडिएका यी ढिस्काहरूभित्र हाम्रा पुर्खाका हाडखोर होलान्, हाम्रा इतिहासका खण्डहर होलान्, यस्तै सोचाइमा म हराएँ । वरिपरिका कालाकाला ढुंगाहरू सेन्ट्रीमा बसेका सिपाहीहरूझैं हामीलाई चनाखो भई हेर्दै थिए । डाँडालाई बायाँ पारेर घुम्दै हामी टुप्पामा पुग्यौँ ।
सालका रूखहरूबीच सानो सम्म चौरजस्तो भागलाई घेरेर सुन्दर स्तम्भ निर्माण गरिएको थियो । तीनकुना भएको स्तम्भको माथि तीनछेउमा तीनवटा चम्चमाउँदा खुकुरी आकाश ताक्दै ठडिएका थिए । २४ अक्टोबर १८१४ मा प्रथमपटक कर्नेल माँवीले आक्रमण गर्न सुरु गर्दा सायद गोर्खाली सैनिकका बलिया मुठ्ठीमा यसैगरी आकाश ताक्दै ठडिएका थिए होलान् चम्चमाउँदा खुकुरीहरू ।
जयकाली र आयो गोर्खालीको आवाजहरू घन्काउँदै मुठ्ठीभर जवान रहेसम्म पनि अंग्रेजको सातो खाएका नेपाली वीर लडाकुको सम्झनामा मैले स्तम्भको प्रदक्षिणा गरेँ । मनभित्र कता-कता के-के पग्लिएजस्तो लाग्दै थियो । विनापानी मरेका आइमाई, केटाकेटीका लासहरू यताउता छरिएका थिए होलान् । आफ्ना सन्तानजत्तिकै प्यारा सैनिक र आइमाई केटाकेटीको पानीको प्यासले पक्क खुलेको मुख हेर्दै कसरी युद्ध सञ्चालन गरिरहे होलान् बलभद्रले ? बारम्बार यी सोचाइहरू मनमा आइरहे । केबी क्षेत्रीयज्यूको उपन्यास सकिएको एक दिनपछिको यात्रा भएकाले युद्धको बीभत्स अन्तिम दृश्य आँखाअगाडि बारम्बार आइरहेको थियो ।
खुकुरी धनुवाँण, भाला, ढुंगा एउटा सानो जिंजल तोप र केही बन्दुकका साथ हिम्मत मनभरि समेटेर लगभग पाँच सय लडाकुले अत्याधुनिक हतियारले सुसज्जित भएको अंग्रेजका ४/५ हजार लडाकुलाई ३५/३६ दिनसम्म रोकेर राख्नु भनेको चानचुने कुरा होइन । त्यसमाथि ३१ अक्टोबरको हमलामा जनरल जिलेस्पी मारिएका थिए । त्यसपछि हतास कर्नेल माँवीले २५ नोभेम्बरमा मात्रै तेस्रो हमला गर्ने आँट गरे । त्यो पनि दिल्लीबाट अत्याधुनिक तोप र अरू थप सेना आइपुगेपछि । यिनै गौरवगाथालाई मनमा गुन्दै थिएँ । 'ला..... पश्चिमतिरको रेलिङ त कसले भत्काइदिएछ, फलामका डन्डी पनि चोरेर पो लगेछन्,' दुःख मान्दै एक्लै बोल्दै थिए आसु । 'मलाई कसैले मेरो घरको आफ्नै रेलिङ उखेलेर लगेजस्तो लाग्यो, भारतीय नेपालीले दुःख गरेर बनाएको चिनो,' उनले व्यथित हुँदै सुनाए ।
'अझै उता टायल फुटाएको छ, कस्ता-कस्ता मान्छे हुन्छन्,' अब म के भनौँ आसुलाई । संसार नै यस्तै छ । लोभीपापीले नै त भरिएको छ यो पृथ्वी । यस्तो जंगलमा, एकान्तमा चोरलाई सजिलो, अन्य बिगार गर्नेलाई पनि सजिलो भइगयो ।
हामीले एकछिन एक-अर्कालाई हेर्‍यौँ । घाम ठीक टाउकामाथि आइपुगेको थियो । 'यो स्तम्भ बनाउनुअघि यहाँ के थियो ? कुनै खण्डहर थियो ?' मैले प्रश्न गरेँ ।
'कहाँ हुनु नि, केही थिएन, केवल लिखित इतिहास थियो, त्यसैलाई पक्रेर यो स्तम्भ बनाएको ।'
'के विजेता-सभ्यता सबैतिर यस्तै हुन्छ ? खण्डहर पनि उजाड्ने, भग्नावशेष पनि उखेल्ने ?' म अलिक भावुक हुन पुगेँछु ।
सालका रूखका छहारीमा म बसेँ र देहरादुन सहर हेर्न थालेँ । चारैतिर जंगलले घेरिएको देहरादुन आफैंमा एक जंगल लाग्दथ्यो । देहरादुनको पछाडि शिवालिक पर्वतमाला लमतन्न परेर पसारिएको थियो । वरिपरिका डाँडाहरू नेपालका डाँडाकाँडा बिर्साउने थिए । 'अब जाऊँ क्यारे,' धुलो टक्टक्याउँदै आसु उठेे । म पनि चुपचाप उठेँ ।
घाममा उस्तैगरी चम्कँदै थिए खुकुरीहरू । मैले यताउति भुइँतिर हेरेँ । आसुका आँखा छली एउटा खस्रो ढुंगा खल्तीमा हालेँ । आहा ! यही ढुंगा शत्रुका टाउकामा बजि्रएको थियो होला । म खुसी भएँ एउटा गतिलो चिनो छानेकोमा । हामी खलंगाबाट तल र्झन थाल्यौँ । मेरा दिमागमा यसका विगत र वर्तमानका किरिङमिरिङ रेखाहरू मिल्दै छुट्टँिदै थिए । अनि मन वर्तमानदेखि अमिलिएर कुनै सुदूर लोकमा भाग्न चाहिरहेको थियो । तर, आँखाअगाडि झल्झली आइरहने खलंगाको स्तम्भले मनलाई तारन्तार सचेत गराइरह्यो । म मनमनै गुन्गुनाउन थालेँछु-
...रातलाई राखेर छेउमा
उसले सुस्ता, कालापानी
अनि नालापानीको पहिलो सूर्यास्त हेर्‍यो ।
Posted by Narthunge at 1:29 AM No comments:
Posted by Narthunge at 1:18 AM No comments:
पुष्पलालले भन्नुभयो- तिमीलाई दुःख मात्र दिएँ
सहाना प्रधान नेपाली अग्रणी महिला नेत्री हुन् । उनका जीवनका कति कुरा प्रेरणाप्रद छन् । कति कुरा बडो दुःखप्रद पनि रहेछन् । सबैभन्दा राम्रो त जीवनको उकाली-ओरालीमा साहस र हिम्मतसाथ जुध्न सक्ने उनको क्षमता सम्पूर्ण नारीले मात्र होइन, पुरुषले समेत अनुकरण गर्न योग्य छन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक पुष्पलालकी जीवनसंगिनी सहानाको जीवन निकै संघर्षपूर्ण रह्यो । एमाले नेत्री सहानाको प्रत्यक्ष अनुभूतिमा कस्ता थिए होलान् पुष्पलाल ? उनी पुष्पलाललाई यसरी सम्भिmन्छिन्-
त्यो ००४ साल वैशाख १७ गतेको दिन थियो । हामी राणाविरुद्धको आन्दोलनमा सहभागी हुँदै थियौँ । त्यही दिन कमरेड पुष्पलालसँग मेरो पहिलो भेट भएको हो । मलाई त राजनीतिका धेरै कुरा थाहा थिएनन् । छोरीले पनि पढ्न पाउनुपर्छ भन्ने चेतनाले म र दिदी साधना राणाविरुद्धको आन्दोलनमा सहभागी भएका थियौँ । हाम्रो आन्दोलनको सफलतास्वरूप पद्मशमशेरले ००४ सालमा पद्मकन्या स्कुल खोलिदिए । यसैको विकसित रूप डिल्लीबजारस्थित अहिलेको कन्या स्कुल हो ।
स्कुल त खोलियो तर त्यहाँ प्राइमरी कक्षा मात्र चलाइन्थ्यो । सात कक्ष्ाासम्म त दिदी र मैले बर्मामै पढेका थियौँ । हामीलाई फेरि पढ्न समस्या भयो । पछि हामीलाई घरमै पढ्ने व्यवस्था मिलाइयो । मैले घरमै पढेर पनि टेस्ट परीक्षा पास गरेँ । यसरी मैले ००४ सालमा एसएलसी पनि पास गरेँ ।
साधना दिदी र म पढ्न लखनउ पुग्यौँ । त्यहाँ अमेरिकी मिसनरी 'इजावेला थोर्वन' कलेजमा हामी आइए भर्ना भयौँ । ००४ सालको आन्दोलनमा लागेर भेट भएदेखि नै पुष्पलालजीको मप्रति आकर्षण रहेछ । तर, मलाई त्यो कुरा थाहा थिएन । हुन त त्यस आन्दोलनमा पक्राउ परेर ब्यारेकमा १५ दिन हामी सँगै बसेका थियौँ । हातमा मसाल बोकेर हामी सँगै पनि हिँडेका थियौँ । त्यस आन्दोलनपछि उहाँ बनारस जानुभयो र नेपाली कांग्रेसको कार्यालयसचिव भएर काम गर्न थाल्नुभयो । म लखनउमा पढिरहेको वेला दुईपटक मलाई भेट्न आउनुभएको थियो । पढाइको सिलसिलामा म देशबाहिर पुगेकी हुनाले हाम्रो भेट हुन भने पाएन ।
कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापनापछि पुष्पलालजी नेपालमा भूमिगत रूपमा आउनुभएको थियो । ००७ सालमा यता आउनुभएको वेला मलाई विवाहको प्रस्ताव राख्नुभयो । हामी दिदीबहिनीको विवाह गर्ने कुरा दिमागबाटै हटिसकेको थियो । मैले पुष्पलालजीलाई 'आफ्नो खुट्टामा उभिएपछि मात्रै विवाह गर्छु' भनिदिएँ ।
००९ सालमा पार्टीको काममा हामी भारत जानलाग्दा पुष्पलालजी नेपाल आउन लाग्नुभएको रहेछ । त्यसैवेला उहाँसँग रेलमा फेरि मेरो भेट भयो । त्यसवेला प्रजापरिषद्सँग मिलेर जनतान्त्रिक मोर्चा निर्माण गर्ने कुरा लिएर उहाँ नेपाल आउन लाग्नुभएको रहेछ । हामी भारतमा एक महिना प्रशिक्षित भयौँ ।
त्यहाँबाट फर्केपछि पुष्पलालजीले फेरि विवाहको प्रस्ताव दोहोर्‍याउनुभयो । म फेरि आपतमा परेँ । म आफ्नै खुट्टामा उभिन सक्ने भइसकेकी थिएँ । तर, घरमा कसैलाई पनि मैले पुष्पलालजीसँग विवाह गरोस् भन्ने चाहना थिएन । त्यसवेला नेवारमा पाँचथरे र ६ थरे भन्ने चलन थियो । पुष्पलालजी पाँचथरे र म ६ थरे पर्‍यौँ । हाम्रो जात पनि मिलेन । त्यसमाथि पनि पुष्पलालजीको परिवारमाथि गहिरो आर्थिक संकट थियो । उहाँको परिवारमाथि राजनीतिक रूपले पनि प्रशासनको आँखा परेको थियो । छोरीले दुःख पाउँछे भनेर परिवारले हाम्रो विवाह स्वीकार नगरेको हो । यसैबीच पुष्पलालजीको सबै सम्पत्ति सरकारले जफत पनि गर्‍यो । विवाहको कुरा चलेपछि हाम्रो घरमा पूरै विरोध भयो ।
साधना दिदीको मनमोहनजीसँग प्रेमसम्बन्ध थियो । तर, उहाँ बाहुन भएको र अरू कुरा पनि ठीकै भएकाले त्यति समस्या थिएन । उहाँहरू हाम्रो नै पहिला विवाह होस् भन्ने चाहनुहुन्थ्यो । पार्टीबाट 'जसरी पनि हामीले विवाह गर्नैपर्छ' भन्ने निर्णय आयो । म पनि विवाह गर्ने निर्णयमा पुगेँ । मेरो परिवारको स्वीकृति भने थिएन । विवाहमा पुष्पलालजीको सबै परिवार आएको थियो । मेरो परिवारबाट भने कोही पनि सहभागी भएन । त्यो ०१० साल माघ २ गतेको दिन थियो । मेरोभन्दा ८/९ महिनापछि साधना दिदीको मनमोहनजीसँग विजेश्वरीमा विवाह भयो । त्यसवेला बुबा, आमा सबै उपस्थित हुनुहुन्थ्यो ।
पुष्पलालजीको घरको आर्थिक अवस्था निकै कमजोर थियो । त्यसको असर मलाई पनि पर्ने नै भयो । विवाहभन्दा पहिले जस्तो म स्वतन्त्र रूपले राजनीतिमा लाग्न पाइनँ । बुहारी भइसकेपछि छुट्टै बोझ थाप्लोमा आइपर्दोरहेछ ।
०११ सालमा छोरी उषा जन्मिँदा नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध थियो । पार्टी भूमिगत थियो र पुष्पलालजी पनि भूमिगत हुनुहुन्थ्यो । छोरीको हेरचाहले गर्दा पार्टीमा मेरो भूमिका बिस्तारै कम हुन थाल्यो । विवाहपछिको जीवन मलाई अनौठो लाग्दै गयो । एक किसिमको जीवनबाट अर्को कुनै संसारमा पुगेँछु भन्ने लाग्यो । पार्टीको मिटिङमा जाँदा परिवारबाट निकै आलोचना व्यहोर्नुपथ्र्यो । कतिपटक म भागेर पनि मिटिङमा गएकी छु । मलाई ससुराले भने माया गर्नुहुन्थ्यो । पार्टीको काममा सहयोग पनि गर्नुहुन्थ्यो । नत्र त परिवारसँग डराइडराई राजनीति गर्नुपथ्र्यो । मेरो राजनीति र पुष्पलालजीको भूमिगत राजनीतिलाई हाम्रो संयुक्त परिवारले त्यति रुचाएन । अन्ततः हामी छुट्टयिौँ । अब राजनीति मैले चटक्कै छाड्नुपर्‍यो । नचाहँदा पनि राजनीति छुट्यो ।
पुष्पलालजी साह्रै नम्र स्वभावको मान्छे हुनुहुन्थ्यो । घरमा मात्रै होइन, बाहिर पनि उहाँ उत्तिकै नम्र हुनुहुन्थ्यो । उहाँ नारी वर्गमाथि आदरभाव राख्नुहुन्थ्यो । हामी सगोलमा बस्दा स्वास्नीमानिसले अबेर खाना खाएको उहाँलाई मन पर्दैनथ्यो । त्यसको विरोधमा उहाँ सधैं बोल्नुहुन्थ्यो । घरमा सबै बुहारीले पढेका थिएनन् । उनीहरूलाई पनि पढ भन्नुहुन्थ्यो ।
त्यसवेला नेपालमा प्राथमिक शिक्षाअन्तर्गत शिक्षकलाई दिइनेे निर्मल स्कुलको तालिम खुल्यो । त्यो निर्मल तालिममा अमेरिकनहरूको पनि सहयोग थियो । नेपाल र अमेरिकाको संयुक्त लगानीमा त्यो तालिम सुरु गरिएको रहेछ । मलाई तालिम लिन वीरगन्ज पठाइयो । त्यसवेला पार्टीको काम पनि गर्नु पर्दैनथ्यो । वीरगन्ज पुगेपछि मैले पिंजडाबाट फुत्केको चराजस्तो स्वतन्त्र भएको अनुभव गरेँ ।
त्यताबाट फर्केर म इलाम गएँ । इलाम जाँदा पुष्पलालजी काठमाडौंमा हुनुहुन्नथ्यो । म गर्भवती पनि थिएँ । न हवाईजहाजको व्यवस्था थियो न त बसकै । वीरगन्ज र इलामको वातावरण धेरै फरक थियो । इलामबाट चाँडै र्फकनुपर्ने भएकोले मलाई अलिकति नमज्जा पनि लाग्यो । पुष्पलालजी पो मलाई लिन आउनुभएछ । हामी दुईजना मात्रै केही समयका लागि प्रकृतिसँगै हराएका थियौँ । र्फकंदा पनि हामी सँगै भयौँ । त्यो क्षण म कहिल्यै बिर्सन सक्दिनँ । त्यस्तो रमाइलो फेरि जीवनमा दोहोरिएन पनि ।
ससुरा पढेकी बुहारी भनेर मप्रति गर्व गर्नुहुन्थ्यो । साह्रै माया पनि गर्नुहुन्थ्यो । कहिलेकाहीँ उहाँ 'सहाना मलाई अंग्रेजी अलिअलि सिकाइदेऊन' भन्नुहुन्थ्यो । म पनि सिकाइदिन्थेँ ।
हामी छुट्टिएर बस्न थालेपछि पनि म ससुरालाई भेट्न हप्ताको एकपटक पुग्थेँ । जाँदा ससुरा हुक्का तान्दै बस्नुभएको हुन्थ्यो । म पुग्नासाथ सासूलाई बोलाउँदै 'ल यहाँ सहाना आइन्, लौ-लौ चकटी हालिदेऊ' भन्नुहुन्थ्यो । उहाँ मलाई एकदमै सम्मान गर्नुहुन्थ्यो ।
मेरी जेठानी हसिना भाउजू (सहिद गंगालालकी पत्नी) मलाई असाध्यै माया गर्नुहुन्थ्यो । मलाई सधैं पढ्न हौस्याउनुहुन्थ्यो ।
शिथिल पार्टी र पुष्पलाल
मैले त पार्टीको काम गर्न छोडिसकेकी थिएँ । पार्टीमाथिको बन्देज हटेको हुनाले ०१३ सालमा अर्धसरकारी जागिर खाएँ । आर्थिक कठिनाइका कारण घर चलाउन निकै गाह्रो थियो । ०१५ सालको चुनावमा पुष्पलालजी कम्युनिस्ट पार्टीबाट, गणेशमानजी कांग्रेस पार्टीबाट उठ्नुभएको थियो । पुष्पलालले चुनाव हार्नुभयो । ललितपुरबाट तुल्सीलाल अमात्यले कम्युनिस्ट पार्टीबाट चुनाव जित्नुभयो । ०१७ सालमा राजा महेन्द्रले गरेको फौजी काण्डपछि सबै पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लाग्यो । त्यसपछि पार्टीको काम खुला रूपमा गर्न सम्भव थिएन । पुष्पलालजीसँग ०१७ सालपछि एक वर्षको दौरानमा ४/५ पटक मात्र भेट भएको थियो । पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लागेपछि सबैतिर अस्तव्यस्त भयो ।
०१७ साल पुस १ गते बिहान । काठमाडौंको गणेशथान पुग्दा केही मान्छे आएर पुष्पलाललाई खासखुस कुरा गर्दै लिएर गए । मैले केही थाहा पाइनँ । पुष्पलालजीलाई साथीहरूले प्रशासनबाट लुकाउन लिएर गएका रहेछन् । त्यसपछि फेरि उहाँ भूमिगत बस्नुभयो । यसबीच २/३ पटक घरमा पनि आउनुभयो । घर आउनुभएको वेला एकपटक झन्डै पक्राउ पनि पर्नुभएको थियो ।
०१८ माघमा उहाँ भारत जानुभयो । म यतै व्यस्त भएँ । म महिनाको एकपटक पुष्पलालजीलाई भेट्न भारत पुग्थेँ । महिनामा ५/६ दिनमात्र सँगै बस्न पाइन्थ्यो । पुष्पलाललाई भेट्न जान्छे भनेर सरकारतर्फका मानिसमा चर्चा हुन्थ्यो । गुप्तचरहरू अघिपछि लाग्थे । यो क्रियाकलाप १५/१६ वर्ष रह्यो । भारतमा जाँदा अनेकौँ मान्छे भेट्न पनि आउँथे । बिपीलगायत अरू नेताहरूलाई पनि म भेट्न जान्थेँ । ०३३ सालमा जब राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिएर बिपी नेपाल फर्के, त्यसवेला पुष्पलाललाई पनि नेपाल आउन दबाब दिइएको थियो । तर, उहाँ आउनुभएन ।
भारतमा पुष्पलालजीको बसाइ एकदमै दुःखी थियो । कोठा सुख्खा हुन्थ्यो । फोहोर पनि हुन्थ्यो । खाना पनि पर्याप्त हुँदैनथ्यो । म कहिलेकाहीँ उता पुगेको वेला कोठा सफा गरिदिन्थेँ । यता नेपाल फर्किने वेला १०/१५ दिनका लागि पुग्ने दाल-चामलको जोहो गरिदिएर आउँथेँ । कहिलेकाहीँ भारतका सिआइडी पुष्पलाललाई पैसा र अन्य सुविधा दिएर 'बिपी सानसौकतमा बसेका छन्, तिमी पनि उसैगरी बस' भनेर फकाउँथे । तर, उहाँले कहिल्यै पनि आफ्नो इमानमा सम्झौता गर्नुभएन ।
हाम्रो घरको आर्थिक अवस्था कहिल्यै सुधि्रएन । म शिक्षिका न थिएँ । धेरै वर्ष अध्यापन गरेँ । त्रिचन्द्र कलेज, पोखराको पृथ्वीनारायण क्याम्पसहरूमा लगातार पढाएँ । पद्मकन्या कलेजमा पनि १० वर्ष पढाएँ । मलाई त्यहाँबाट उँभो चढ्नुपर्छ भन्ने थिएन । यी सब भइरहेको वेला ०३२ सालको विद्यार्थी आन्दोलनलाई सघाएको आरोपमा त्यही वर्षको भदौमा मलाई जागिरबाट निष्कासित गरियो । मैले त्रिचन्द्र कलेजमा ०१८ सालदेखि पढाउन थालेकी थिएँ । मेरो जागिर पनि गएपछि त हाम्रो घरको अवस्था झनै नाजुक भयो । मैले जागिर छोड्दा त्रिविको आवासगृह पनि छोड्नुपरेको थियो । घर खाली नभएको कारणले छोराको साथीको घरमा गएर पनि बसियो । त्यसवेला आफन्तले पनि सहयोग गरेनन् । त्यसपछि मैले केही समय ट्युसन पढाएर घरको आर्थिक अवस्थाको भरथेग गरेँ ।
अन्तिम अवस्थामा पुष्पलाल
यहाँ बस्न दिक्क लागेर म बनारस लागेँ । पुष्पलालजीसँग पनि भेट्न म उता पुगेकी थिएँ । उहाँसँगै भेटघाटमा हामी आसाम, गुहाटी, लखनउ, दिल्ली आदि ठाउँ घुम्यौँ । त्यसपछि अचानक पुष्पलालजी बिरामी हुनुभयो । त्यसवेला पार्टीको स्थिति पनि राम्रो थिएन । उहाँ बिरामी भएको वेला हेर्न धेरै मानिस आए । भारतीय नेता चन्द्रशेखर पनि उहाँलाई हेर्न आए । बिस्तारै उहाँको अवस्था नाजुक भयो । मेरो जन्मदिन आउँदै थियो । भोलि बिहानै अस्पताल आउँदा पुष्पलालले 'ह्याप्पी बर्थडे सहाना' भन्नुभयो । मैले 'धन्यवाद' भनेँ । त्यसवेला मेरो आँखामा आँसु टिल्पिलाएको थियो । सायद त्यो आँसु गाला हुँदै तलतिर झर्‍यो ।
त्यसको एक हप्तापछि म बिहानै आइसियूमा पल्टिइरहेका पुष्पलाललाई भेट्न पुगेँ । उहाँको अनुहार फुंग उडेको जस्तो लाग्यो । म बेडनजिक पुग्दा उहाँका आँखा रसाएका थिए । उहाँ पीडाले हुँ-हुँ गरिरहनुभएको थियो । सास बढेको छ । अनुहार फुंग उडेको छ । मैले हेर्न सकिनँ । म पनि निकै रोएँ छु । केहीछिनपछि मलाई मात्र भित्र बोलाइयो । मलाई देख्नासाथ उहाँले अक्सिजनको मास्क झिक्नुभयो । मलाई हेर्दै स्वाँ-स्वाँको आवाजसाथ उहाँले भन्नुभयो, 'सहाना..ति..मीलाई..मैले दुःख मात्र दिएँ, ति..म्रो..निमित्त केही गर्न सकिनँ । अब... अगाडिका कामहरू पक्कै पनि...तिमीले गछ्र्यौ होला ।' सास धेरै बढ्यो, मैले हतारहतार अक्सिजन मास्क लगाइदिएँ । उहाँले बडो कष्टसँग बोलेको मैले हेर्न सकिनँ । त्यहीवेला गिरिजाप्रसादसँग ४/५ जना कांग्रेसका साथी उहाँलाई भेट्न आए । केहीबेरमा डाक्टरले 'हि इज नो मोर' भनेर घोषणा गरे । यो ०३५ साउन ७ गतेको कुरा थियो ।
त्यसै दिनदेखि म विधवा बनेँ । दागबत्ती दिन छो
रा उमेश आएका थिए । पुष्पलालजीको तेह्राँ दिनको काम सकेपछि अरू बनारसबाटै नेपाल फर्किए । म दिल्ली आएँ । दिल्लीको एक रातको बसाइपछि म नेपाल फर्किएँ । त्यसपछि म कहिल्यै फर्केर बनारस गइनँ ।
Posted by Narthunge at 1:17 AM No comments: